What is Facebook Pixel ? - Bits Century
HomeDigital MarketingWhat is Facebook Pixel ?
Facebook Pixel ဆိုတာဟာ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Website နှင့်တွဲသုံးရတဲ့ Code တစ်ခုလို့ပဲ အကြမ်းဖျဉ်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ အရင်က Facebook မှာ Conversion Pixel နှင့် Custom Audience Pixel ဆိုပီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။၂၀၁၇ မှာတော့ Conversion Pixel ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြပြီး လက်ရှိ Pixel နဲ့ပဲ ဆက်လက်အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။
Facebook မှာ Boost လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ၊ Ads တွေကို ဆရာကျကျ ကြော်ငြာချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် Pixel ကနေ အသုံးပြုခြင်းက သာမာန် Boost Button နှိပ်လိုက်ခြင်းထက် အများကြီးပိုမို အကျိုးရှိပါတယ် ။
Pixel က လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Website ကို ဝင်ကြည့်ရှုသူတွေကို မှတ်သားထားပြီး User တွေရဲ့ Data တွေကိုစုဆောင်းပေးခြင်း ၊ User များကို Tracking ပြုလုပ်ခြင်း ၊ Audiences မှတ်ယူခြင်းများကို အချိန်ပြည့် သိမ်းဆည်းပေးနေတာပါ။ ထိုသို့ Pixel ကနေ သိမ်းထားပေးသော Users များကိုအသုံးပြုပြီး Facebook မှာ ကြော်ငြာခြင်းက ပိုမိုပြီးထိရောက်စေပါတယ်။
ဘယ်လိုထိရောက်တာလဲဆိုရင် လူကြီးမင်းရဲ့ Product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကော်ဖီကို Website မှာတင်ပြီး Pixel မှတ်သားထားပေးမယ်ဆိုရင် Boost လုပ်တဲ့အခါကျ Facebook က ကော်ဖီကြိုက်တဲ့ Audience ၊ ကော်ဖီဝယ်ဖို့ Search Engines တွေမှာ ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေကိုရွေးပြီး ပြသပေးမှာပါ။ လူကြီးမင်း ကားအကြောင်း ရှာဖွေထားရင် ကားကြော်ငြာတွေ မကြာခဏ တက်လာတာမျိုးပါ။ Pixel က Facebook Marketing မှာ အလွန်အသုံးဝင်ပြီး ဆရာကျကျ အသုံးပြုချင်တွေသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကော်ဖီနဲ့ပက်သက်တဲ့ Articles လေးတွေကို ရွေးတင်ပြီး Pixel နဲ့ အရင် မှတ်သားထားပါတယ်။ တစ်ခါထဲ Boost တန်းမလုပ်ပါဘူး ။ Traffic အထောက်အလျောက်ရလာမှ ကော်ဖီကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားပြီး ကြော်ငြာခြင်းက ပိုမိုထိရောက်စေပါတယ်။
အဲ့သဘောတရားကတော့ Leading ဖြစ်အောင် အရင် စုဆောင်းတာပါ။ လူကြီးမင်းထုတ်ကုန်ကို စိတ်ဝင်စားအောင် အရင်ဆုံး Articles လေးတွေနဲ့ Website ထဲဝင်လာအောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။ Leading တွေရလာတော့မှ ကြော်ငြာကို စတင်အသုံးပြုပြီး Sale ဖြစ်အောင် လုပ်ယူပါတယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရမှာ Pixel ကတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။
ကြော်ငြာ ဖန်တီးရာမှ Facebook ရဲ့ Buildin funstions များဖြစ်တဲ့ အသက် ၊ နေရာ လောက်တင်မဟုတ်ပဲ လူကြီးမင်းရဲ့ website ထဲမှာ ကိုယ်မှတ်ယူချင်တဲ့ Users အတိုင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဉပမာ Website ရဲ့ Price & Quotation တို့ About Us တို့လိုမျိုးပါ။ဒါမှမဟုတ် ထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းဆို ဘယ်ပစ္စည်းက ကြည့်ရှုသူအများဆုံးဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုပါကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ထိုပစ္စည်းရဲ့ Audience ကိုရွေးပြီး Facebook မှာကြော်ငြာရမှာပါ။ အဆုံးသတ်အနေနဲ့ Pixel ဆိုတာ Facebook နဲ့ website ကြား Users များကိုခြေရာခံထားတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့ပဲပြောရမှာပါ။
Website နှင့် Pixel ကိုတွဲပြီးအသုံးပြုခြင်းဟာ ပိုမို ထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး သာမာန် Boost လုပ်ခြင်းများထက် ပိုမိုသာလွန်လျက်ရှိနေပြီး ROI ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာပါ။ Instragram မှာလဲ အလားတူ Users Tracking စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်လာဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။